N'ogbe Rip-Kwụsị Pantị na-ebu ibu nwoke na-emepụta ihe na onye na-ebubata ya. Westfox
Ụdị ọkọnọ: Ọrụ OEM
Nọmba nlereanya: WF-CP0004
Ngwakọta akwa: 97% akwa 3% Spandex
Tụkwasịnụ Ikike: 30,000pcs kwa ọnwa
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T/T, L/C
1.Fechaa, Rip-stop na ala ihe
2.A na-ebipụ ikpere na crotch dị ka ergonomic nke echiche akụkụ atọ, nke dabara maka ụdị mmegharị ahụ nwekwara ike na-eyi n'ụkwụ. Mgbanaka triangle plastik; ụdị mkpọda ụkwụ dabara adaba, dabara maka akpụkpọ ụkwụ.
3.Otutu akpa: Akpa abụọ dị n'ihu nwere akụkụ siri ike; nnukwu akpa ibu abụọ na-ebuwanye ibu n'akụkụ abụọ yana obere akpa abụọ yana mkpọchi na-ebu akụrụngwa gị niile dị mkpa; A na -etinye akpa azụ n'akụkụ abụọ nke okirikiri hip. Ịkwa akwa nke ukwuu abụghị naanị na ọ na -arụ ọrụ kamakwa ọ mara mma.
4.OCCASION: Nke a bụ akwa owu na -adịchaghị oke ma ọ bụ buru oke ibu. Ọ bụ akwa mara mma iji mee ihe n'afọ niile. Pantị Tactical dị mma maka ime ihe n'èzí na iyi kwa ụbọchị, ọkachasị maka njem mkpagharị, ịchụ nta, ịrị elu, ịgba ịnyịnya, ịkụ azụ, ịgba bọọlụ, ịgba égbè, ọzụzụ ndị agha, wdg.
Fabricdị Ụdị 97% akwa 3% Spandex
Febric Specification A na -eku ume, na -adịgide adịgide, mmiri na -asọ, na -eme ngwa ngwa, nwee ntụsara ahụ
Logo Nnyefe ọkụ, Mbipụta ihuenyo silk, Silicone Gel, kpara akpa
Cmmanụ Agba ọ bụla ị rịọrọ
Packing 1pc/polybag, ma ọ bụ dị ka ihe ị chọrọ
MAQ 3000 PC kwa agba
Shipping EMS, DHL, FedEx, TNT, UPS, mbupu ụgbọ mmiri
Doge ọ bụla 35-45 ụbọchị mgbe ekwenyechara nkọwa niile
POkwu mmeghe L/C, T/T.
MEN CARGO PANTS size size
1. A na-eji aka tụọ akụkụ niile na ngbanwe na 1-2cm.
2.N'ihi ọdịiche dị n'ìhè na ngosipụta, enwere mperi ụfọdụ na agba na eserese n'etiti ezigbo na webụsaịtị, ụcha ahụ dabere na ngwaahịa ị nwetara.
Tmụtakwuo maka otu ụdị.
Ckpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnụahịa, mbukota, mbupu na mbupu.
A na -eji Pants eme ihe
Nke gara aga: Ebube Ebube Eji Mpempe akwa Cotton
Osote: Akpụkpọ anụ dabara adaba
Ogo nke mbụ, echekwara nchekwa
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwoke dị mkpụmkpụ 13 Inch Loose Fit Twill
Twill zuru ike Fit Pant
Ebube Ebube Eji Mpempe akwa Cotton
Jiri mgbatị Zipper rụọ ọrụ